University of Western Ontario - Education in Kanada
fanafohezan-teny : Uwo
Créé : 1878
mpianatra (eo ho eo.) : 37000
Aza adino ny ifanakalozy hevitra University of Western Ontario
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversiten'i Western Ontario
The University of Western Ontario (Uwo), indray-marika toy ny Western University, dia ho an'ny daholobe oniversite fikarohana miorina ao London, Ontario, Kanada.
Ny oniversite naorina tamin'ny 7 March 1878 Nataon 'ny Eveka Isaac Hellmuth ny Anglikana diosezin'i Huron ho “Ny University of London Western Ontario.” Tsy nampidirina Huron University College, izay efa naorina tao 1863. Ny efatra voalohany misaina ireo Arts, maha-Andriamanitra, Lalàna sy ny Fanafody. Ny Western Oniversiten'i Londres tamin'ny farany natao tsy fiangonana amin'ny 1908.
Araka ny 2015 Academic Ranking ny World Anjerimanontolo (ARWU) filaharana, ny oniversite laharana 201-300 eo amin'izao tontolo izao sy 7-16 in Kanada. The 2011 QS World University Rankings laharana faha-157th ny oniversite eto amin'izao tontolo izao, manao izany fahafito in Canada. Maro ny fandaharan'asa tandrefana ihany koa ny laharana amin'ny filaharana tsirairay. Siansa ara-tsosialy ao amin'ny tandrefana dia laharana 96th eto amin'izao tontolo izao ao amin'ny 2010 QS World University Rankings, ary ny Ivey tandrefana Business School dia laharana 1 ao amin'ny World ao amin'ny Global MBA Category ny Bloomberg Businessweek.
Tandrefana ny Co-fanabeazana Mpianatra tenan'ny ny 24,000 maneho 107 firenena manerana izao tontolo izao sy ny manam-pahaizana tandrefana kosa hampitoetra ny fikarohana sy ny fanabeazana sy ny fiaraha-miasa fiarahamiasa ny kaontinanta rehetra. Misy mihoatra noho 306,000 Alumni izay miasa iraisam-pirenena, velona sy miasa maneran-tany. Malaza Alumni ahitana manam-pahefana, manam-pahaizana, raharaham-barotra ny mpitondra,Nobel Laureates, Rhodes manam-pahaizana, ary ny manan-kaja namany.
Tandrefana ny varsity ekipa, fantatra amin'ny anarana hoe ny tandrefana Mustangs, hifaninana ao amin'ny University Ontario Athletics fihaonambe ny Canadian Interuniversity Sport.
Nahazo diplaoma & Postdoctoral Studies
Avy amin'ny voalohany faniriana ny Eveka Hellmuth fantatra iraisam-pirenena ho an'ny fikarohana ny manam-pahaizana ambony amin'izao fotoana izao, ireo mpitarika ny fahitana, herim-po aman-tsain'olombelona foana nijery ny hoavy amin'ny famolavolana Western University.
Naorina tamin'ny Martsa 7, 1878 Nataon 'ny Eveka Isaac Hellmuth (1817-1901) eo amin'ny Fiombonambe Anglikana diosezin'i Huron, 'Ny London University of Western Ontario' nanokatra ny varavarany ho an'ny mpianatra voalohany ao 1881 efatra fahaizanareo - Zavakanto, maha-Andriamanitra, Lalàna sy ny Fanafody.
In 1916, ny toeram-pianarana amin'izao fotoana izao dia novidiny tamin'ny Kingsmill family, ary amin'ny 1923 ny oniversite dia anarana ny University of Western Ontario.
Nanomboka tamin'izay nahazo diplaoma tamin'ny kilasy voalohany 1883, ny anjerimanontolo lasa foiben'ny fianarana mihetsiketsika. Amin'ny alalan'ny 12 -misaina sy ny mpikambana telo oniversite kolejy, Western amin'izao andro izao dia manolotra ny 36,000-Plus mpianatra mihoatra noho ny 400 specializations, majors sy ny zaza tsy ampy taona.
Izany dia amin'ny Western izay Sir Frederick Banting nitsangana tamin'ny tsy manam-pijanonana hatory na dia any 1920 ary nanoratra avy 25 teny izay nitarika ny zavatra hitany ny insuline.
Izany dia amin'ny tandrefana toerana voalohany Kanada frantsay fandaharana naorina Ny firobohana lalina ao amin'ny Trois-Pistoles, Québec, in 1932 - ny fandaharana izay mitohy amin'izao fotoana izao.
Izany dia amin'ny Western izay mpikaroka tarihin'ny Ivan Smith lasa voalohany izao tontolo izao 'kobalta baomba' mba hitsaboana ny homamiadana ao amin'ny 1951, mitombo ny tahan'ny fanafody ho an'ny homamiadan'ny ny vozon-tranonjaza 75 isan-jato avy amin'ny 25 isan-jato.
Ary raha ny tena tsara fakany ny tenany teo amin'ny tantara, Western manohy-maso ny manaraka hitan'ny taranaka.
Western, ny mpitarika ao amin'ny rivotra injeniera hatramin'ny 1965, mizaha toetra toy izany rafitra toy ny World Trade Center, Sears Tilikambo sy Jakarta Tower, hanohy ny fahefana amin'ny fanokafana ny WindEEE Dome fikarohana toerana.
Western, ny mpitarika ao amin'ny raharaham-barotra ny fampianarana hatramin'ny nanorenana, nanohy ny hitarika ao an-trano sy any ivelany noho ny fanorenana ny fanjakana-avy-ny-kanto Richard Ivey School of Business in 2012 ary ny fanokafana ny Amerika Avaratra voalohany toeram-pianarana ao amin'ny sekoly fandraharahana Hong Kong in 1998.
Western, ny fandrosoana ara-pitsaboana mpitarika hatramin'ny nanorenana, no mbola manosika fanavaozana vao haingana indrindra ny VIH rehefa lasa ny Dr vaksiny. Chil-Yong Kang nahazo fankatoavana avy amin'ny Etazonia Sakafo sy ny Fanafody Administration hanomboka pitsaboana olombelona fitsapana, ny voalohany amin'ny karazany, in 2012.
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra University of Western Ontario ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Western Ontario amin'ny Map
Photos: University of Western Ontario ofisialy Facebook
University of Western Ontario Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Western Ontario.